Momba anay | Jiangxi Rayone Wheels Technology Company Limited
RAYONE WHEELS, natsangana tamin'ny Mey 2012, dia orinasa manana teknolojia avo lenta maoderina izay manampahaizana manokana amin'ny famolavolana, famokarana ary ny fivarotana kodiarana firavaka alimina amin'ny fiara. Ny orinasa RAYONE dia manarona faritra mihoatra ny 200.000 metatra toradroa, miaraka amina famokarana kodiarana aliminiana matihanina sy mandroso ary fitaovana fitiliana.
Amin'ny lafiny Scale, ny fahaizan'ny famokarana ankehitriny dia kodiarana fiara 1 tapitrisa.
Mikasika ny teknolojia famokarana, RAYONE dia manana tsipika famokarana mavesatra, tsipika famokarana tsindry ambany ary tsipika famokarana sandoka, izay afaka mamaly ny filan'ny mpanjifa isan-karazany eran'izao tontolo izao.
Mikasika ny fiantohana kalitao, RAYONE dia nandalo ny IATF16949, famaritana ny rafitra kalitaon'ny fiara iraisam-pirenena. RAYONE dia nanonona ny fenitra ara-teknikan'ny foiben-kodiarana alim-by ho an'ny fiara any Japon mba hiantohana ny fiarovana sy ny vokatra avo lenta azo antoka. Mandritra izany fotoana izany, RAYONE dia manana laboratoara fampisehoana auto hub miaraka amin'ny fahafaha-manao fanandramana tsy miankina, izay napetraka mifanaraka amin'ny fenitry ny laboratoara VIA an'ny fikambananan'ny fiara fitaterana ao Japan.
Raha ny fanavaozana ny teknolojia dia mijery tsara ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fanavaozana ny teknolojia i RAYONE, manana ekipa teknika matihanina hampahafantatra sy handraisana teknolojia mandroso hatrany Eropa, Amerika, Japon ary firenena hafa, ary RAYONE dia mahazo tombony amin'ny mpiara-miasa anatiny sy avy any ivelany, ampifandraisina amina foto-kevitra famolavolana kendren'ny olombelona sy teknolojia faran'izay tsara, ary havaozina tsy tapaka hanatsara ny hamafin'ny hub, hampihena ny lanjan'ny hub, hanatsara ny fahombiazan'ny hub amin'ny lafiny rehetra, ary hanarahana ny fepetra fitehirizana angovo ho an'ny indostrian'ny fiara manerantany amin'ny firoboroboan'ny fampandrosoana.
Eo amin'ny lafiny fampandrosoana ny tsena dia mampiditra an-tserasera sy an-tserasera ny RAYONE mba hamenoana ny firafitry ny tsena manerantany amin'ny vokatra sy serivisy avo lenta. Miaraka amin'ny kalitaon'ny vokatra tsara, laza tsara ary serivisy vokatra avo lenta, nahazo fiderana malalaka teo amin'ny tsena i RAYONE.
Raha ny ekipa talenta dia mahay mahita talenta i RAYONE, mikitika ny fahaizan'ny talenta, mamboly hatrany ny talenta, mampihetsika ny fanentanana anaty ny talenta ary mahatratra talenta. RAYONE dia manana hevitra mandroso famolavolana, fahaiza-manao famokarana matanjaka, maodely ara-barotra eken'ny besinimaro ny herin'ny sangany, nanangona traikefa manan-karena manankarena, ary mahafehy ny rafitra fitantanana hahafeno ny fepetra takiana amin'ny fampandrosoana ny fotoana, miaraka amina endrika mahery sy fahaizana R&D.
Aiza no misy fiara Aiza i Rayone
Aterineto foana isika
Mamorona lanja ho an'ny mpanjifa
Hitarika lamaody ary hiantohana ny fiarovana ny dia amin'ny olombelona
Ho marika marika kodiarana amin'izao tontolo izao izay hajain'ny indostrian'ny kodia
mametraka ny tombotsoan'ny hafa ho lohalaharana, manao ny tsara indrindra amin'ny zava-drehetra, miray hina ho iray, miasa am-pahazotoana isan'andro, manao fanavaozana amin'ny fotoana rehetra, ho henjana, hifaninana amin'ny tenantsika mba hihatsara sy ho tsara, mifantoka amin'ny vokatra
Ny fitiavana ny olona rehetra sy ny hetahetany hanana fiainana tsaratsara kokoa dia tsy niova. Fiainana mahafinaritra, tsiro tsara!
Ny ekipa RAYONE dia manolo-tena amin'ny fanomezana ny hatsaran-tarehy amin'ny tokantrano an'arivony, mampiditra singa maoderina sy lamaody miaraka amin'ny fahatsapana siansa sy teknolojia ao anaty kodiarana fiara, ary mamadika ireo kodiarana ho lasa kanto mihazakazaka.
RAYONE dia manaraka hatrany ny fepetra takiana sy ny fifehezana ny antsipiriany, ary aza hadinoina mihitsy ny fikasana tany am-boalohany tamim-paharetana, ary miaro ny hatsarana tena marina.
Faharanitan-tsaina sy fiarovana ny hatsarana.
Ny fikirizana rehetra dia mitaky fikirizana. Ny tsirairay dia tokony hitadidy ny nofy tany am-boalohany. Manoloana an'io nofinofy io dia hanohy fikirizana izahay ary hiezaka hahatratra ny ranomasina manga sy ny lanitra manga misy antsika. RAYONE ho eo anilanao mandrakizay.